Raysal wasaare Rooble oo Madaxda Maamulada u diray Warqad , kadib markii ay Balanta ka baxeen | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Raysal wasaare Rooble oo Madaxda Maamulada u diray Warqad , kadib markii ay Balanta ka baxeen
Oct 17, 2020 - 12 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Raysal wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhambaal Xasuusin ah u diray Madaxda maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle.
Waxaa laga Codsaday madaxda maamulada inay soo gudbiyaan Magacyada Xubnaha maamulada ku meteli doona gudiga doorashooyinka, sida uu dhigayey Heshiiskii lagu gaadhay Muqdisho.
Waxaana la dhaafay wakhtigii laga sugayey in maamul kasta uu soo magacaabo 2-Xubnood oo kamid noqon doona Gudiga Doorashada iyo Gudiga Xalinta Khilaafaadka.
Raysal wasaare Rooble madaxda maamulada ayuu ka codsaday inay Xubnahan kusoo xulaan si waafaqsan Shuruucda dalka iyo Habraaca lagu Heshiiyey, iyadoo la tix gelinayo Jadwalka Doorashada.
Waxaa madaxda maamulada laga codsaday inay ugu dambayn soo gudbinayaan 20-ka Bishan aynu ku jirno.
Warqadda loo diray maamulada waxaa sidoo kale laga codsaday inay soo gudbiyaan magacyadda (8) Xubnood oo kamid noqon doona Gudiga maamulka Doorashooyinka, ugu dambayn 20-ka Oktoobar si loogu soo saaro Faafinta Rasmiga ah ee JFS.
Soomaaliya ayaa waxay gelaysaa Marxalad doorasho, waxaana sidoo kale Bilowday Olole ay wadaan Musharixiinta kala duwan ee Damacu uga Jiro Hogaanka dalka.
Dawlad Goboleedyada shalay ayagaa laga joogi waayey oo lahaa Dawlada Dhexe ayaa dib u dhigaysa Doorashada hadana waad aragtaan ayagii baanba diyaar ahayn !!!
Jaale Rooble waa nin mar hore muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay in wax walbo ku qabsoomaan waqtiga loogu tala galay. Mudane Rooble waxaan ku leeyahay waan aragnaa hawsha fiican aad wado dadaalkana halkaa kasii wad ilaa aad xilka ku wareejiso Madaxda kale ee imaan doonta.
Meesha dowlad kama jirto umada beenta kala hortaga.
Waa run hadaad si u fiiriso Dawlad kama jirto Soomaaliya waxaana qaladkaas leh Farmaajo oo Somalida ka qasaariyey 4 sano !
Laakiin waxaa la yiri ma wanaagsana in qofka Islaamka ah uu quusto walina rajo ayaan qabnaa waxaana Alle ka baryeynaa mid Dawlada Farmaajo dhaanto in Eebe nasiiyo.
Waar maqaaxidii kalshaale.ca sidii Xaarmajo ayay musalaf noqotay. Cayayaankii n&n gacantay taageen!
Dhubuq-dhubuq hore dhabanahays dambeye leedahay!
***MASHRUUCA BIYO XIREENKA B/WEYNE***.
Waxaan qaba, in mashruucan Madax looga dhigo RUUX ka soo jeeda Beelaha laga badanyahay oo laga dhawro beelaha Tugada oo ku amartaagleeya Gobalka sida Midda Tan aan ka soo jeedo. ≈©≈Anigu waxaan jeclaalaha, IN MADAX Loga dhigo Aqoonyahan ka soo jeeda beesha MAKANNE. ≈©≈Mahad Salaad AAMUS, Mattabaan waa deggaan Xawaadle Waxaa ku siiyay AUNTE M.S. Barre oo rabay Inaysan Beelaha Aagaa deggaa, aysan u midoobin oo ay ku mashquulaan xinka dhexdooda SI Aysan xukunkiisa dhibaato ugu keenin.≈©≈Adeer, Reer Cilmi Dhurwaa WAXAA keenay Hiiraan adeerkay Aaden AUNTE (Waa taariikh aadan war ka hayn Saan malayn).≈©≈Mahad adeer, tartiibso WAXAA iiga kaa muuqata INAAD is-mahadise.≈©≈Shaqo kuma lihii Jowhar, Walaa Buulo Burti Laakin B/weyne halaga qaado Madaxnimada Gobolka Hiiraan Cidna ka yeelimaayo. WBT
Axmed asaasaq wuxuu caawa qiray laba arin oo uu in badan dafirayay.kkk
1. In Afweyne ahaa munaafaq dadka isku dira. Akhri qoraalkiisa “Mattabaan waa deggaan Xawaadle Waxaa ku siiyay AUNTE M.S. Barre oo rabay Inaysan Beelaha Aagaa deggaa, aysan u midoobin oo ay ku mashquulaan xinka dhexdooda SI Aysan xukunkiisa dhibaato ugu keenin”
2. Wuxuu kaloo cadeeyay inuu ka dhashay, akhri adba “Waxaan qaba, in mashruucan Madax looga dhigo RUUX ka soo jeeda Beelaha laga badanyahay”
Sow wuxu waa Yixir!
Laalays adeer, WAAN kula doodi-lahaa Haddaad MASKIYIYAN nin fiyow tahay. WBT
Si cadaanka america
Looga ilaaliyo xukunka
Waa in America ILHAAN
OMAR madaxweyne looga
Dhigaa , waxay lamid tahay
In reer hiiraan maamulka laga
Ilaaliyo oo Axmed hangash
JIILKAAN ay ka midka yihiin, Green man iyo Laalays WAA kuwey u dhammaatay XITAA qoraaladi ay fahmi làyihiin. WBT
Laalays adeer, wax “YIXIR” la yiraah ma jiraan EE WAXAA tiraah YAXAR, magacu Waa Yaxye EE Somalidi waagaa ayyaa Kariweysay. ≈©≈Adeer, intaad aqoon ka raadinayso Waxaadan garanayn, Maxaa kuu diiday inaad nasheegato, Tumaal Ama Midgaan Anaa wada ahe. WBT
Green Man, horta ma gudbeyahaw Markaad wax qorayso, KA billow XARAF Weyn oo HA iska tororoglayne Isticmaal xarfaha; yaabka !!!, joogsiga …, súaasha ??? iyo kuwa la mida. WBT
Laaleys ma waxaad mooday inuu dadka dhamaantii yahay sidaada oo kale . Xataa waxaad quuriweyday ood qiriweyday eraygii ahaa : Gaalka dil oo gartiisa sii !
Qofku markuu iska indhatiraya runta waxuu dadka u sheegayaa inuu yahay YAAHUU WAR I MOOD !